Sida Loo Helo Kaararka Hadiyadda Amazon ee Lacag La'aanta ah: 24 Xeelado Lagu Helo Ilaa $ 100 Off
Bogga ugu weyn Sida Loo Helo Kaararka Hadiyadda ee Amazon oo Lacag La'aan ah: 24 Tricks si aad u hesho $ 100 Off 2021
Shakhsiyaadka badankoodu waxay jecel yihiin dukaamaysiga. Wayna jecel yihiin, xitaa in ka sii badan, markay lacag la’aan wax ku iibsan karaan.
Haddii aad doorato inaad wax ka iibsato internetka ama dukaanka, adeegsiga kaararka hadiyadda ayaa fududeynaya dukaamaysiga. Iyo kasbashada Kaararka Hadiyadda ee bilaashka ah ee Amazon ayaa gabi ahaanba ka dhigaysa wax iibsiga mid xiiso leh.
Laakiin sidee baad ku heli kartaa Kaararka Hadiyadda Amazon ee bilaashka ah?
Waxaa jira dhowr iyo toban dariiqo oo lagu helo kaararka hadiyadda ee Amazon oo lacag la’aan ah.
Maqaalkan, waxaad ku heli doontaa talooyinkeena ugu fiican ee furitaanka furayaasha kaarka hadiyadda ee Amazon oo bilaash ah, kuwaas oo dhammaantood u baahan dadaal aad u yar.
Amazon ayaa gebi ahaanba beddeshay habka inteena badan wax u dukaamaysato. Labaatan sano ka hor, ma malayn karno ku -habboonaanta furitaanka laptop -ka, daalacashada dhowr daqiiqo, amar bixinta oo lagu keenayo laba maalmood gudahood.
Maanta waxaad ka heli kartaa ku dhawaad ​​wax walba Amazon - badiyaana qiimaha ugu hooseeya ee suuqa!
Waa kuwan 24 -ka Siyaabood ee Sharciga ah ee lagu Helo Kaararka Hadiyadda Amazon ee Bilaashka ah.
Sida Loo Helo Kaararka Hadiyadaha Amazon ee Bilaashka ah: Eazy Hack
Waxaad wax badan ka maqlaysaa sahaminta onlaynka ah ee ku saabsan wada sheekaysiga sidaad lacag ugu samayn lahayd guriga. Xitaa haddii qofna uusan ku hodanayn sahanno, waxaad si dhaqso ah oo sahlan ku heli kartaa lacag. Qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay bixiyaan fursad ay ugu beddelaan abaalmarintooda lacag la'aan Amazon gift gift, taas oo aad ugu habboon maadaama Amazon ay leedahay wax walba.
Wali ku wareersan macnaha sahanka online -ka?
Halkan waa mid degdeg ah: Sahaminta onlaynku waa xog -waraysi oo dhagaystayaasha la beegsanayo ku dhammaystiri karaan internetka. Sahaminta onlaynka ah ayaa sida caadiga ah loo abuuraa sida foomamka Webka oo leh keyd xog si loo kaydiyo jawaabaha iyo softiweerka tirakoobka si ay u bixiyaan falanqayn.
Markaa, haddii aad rabto inaad kaqaybqaadato ciyaarta baadhitaanka onlaynka ah, waa kuwan meelaha ugu fiican ee aad la shaqayn karto.
#1. Sahanka Junkie
Survey Junkie waxay bixisaa tiro balaadhan oo ah sahan lacag -bixin ah. Sahan kasta waxaa loo qoondeeyey dhibco (badiyaa inta u dhexeysa 100 iyo 200 dhibcood) iyo qiyaasta waqtiga jawaab celinta. Markaad ururiso 1,000 dhibcood oo u dhiganta $ 10 - waad bixin kartaa lacag. Marka la barbardhigo goobaha kale ee sahanka, tani waa marinka lacag bixinta oo aad u hooseeya, taas oo ah faa'ido weyn.
Markay tahay waqtigii aad lacag bixin lahayd, waxaad heli doontaa lacagtaada Kaarka e-Gift isla markiiba. Ma jiro xilli sugitaan.
Amazon maahan doorashadaada kaliya ee aad dhibcahaaga ugu beddeli karto kaararka hadiyadda, Survey Junkie waxay bixisaa xulashooyin badan:
Waa kuwan qaar ka mid ah xulashooyinka kale ee laga heli karo Survey Junkie:
Iyo dabcan, PayPal
Guji halkan si aad Isqorto
Soo hel swagbucks (oo sidoo kale loo yaqaan "SB") si aad uga jawaabto sahannada iyo daawashada fiidyowyada sariirtaada. Xitaa waxaad ku kasban kartaa abaalmarin iibsiyadaada tooska ah ee tooska ah adoo adeegsanaya bogga wax iibsiga ee Swagbucks.
Kaydso abaalmarintaada oo u fur iyaga lacag la'aan Amazon gift gift. Ma qaadanayso waqti dheer - sahannada badankoodu waxay bixiyaan ugu yaraan 60 swagbucks, iyo 500 swagbucks ayaa ku siinaya Kaarka hadiyadda ee Amazon ee $ 5.
Halkan Guji si aad Isqorto
Hab kale oo aad jeceshahay inaad ku hesho kaarka hadiyadda ee bilaashka ah waa inaad wax ka iibsato Rakuten. Kani waa dalab hal-nooc ah marka la eego kaararka hadiyadda ee bilaashka ah, laakiin waxaad sii wadi kartaa inaad lacag-celin ku hesho ku dhawaad ​​iibsi kasta oo onlayn ah.
Marka ugu horreysa ee aad iska diiwaangeliso Rakuten, waxaad dooran kartaa inaad hesho $ 10 kaarka hadiyadda Walmart ama $ 10 gunno lacageed Rakuten.
Qaado gunnada ka dib markii aad ku iibsatay Rakuten $ 25 -kii ugu horreeyay.
Lacag -celinta ayaa laga heli karaa 2,000+ dukaanno onlayn ah iyo 30+ tafaariiqleyaal jireed. Kaarkaaga hadiyadda ayaa la soo diri doonaa ka dib marka aad iibsato kowaad.
Haddii kale, Rakuten wuxuu kuugu soo diri doonaa abaalmarinnadaada lacag caddaan ah boostada ama PayPal rubuc kasta marka dheelitirkaaga lacagta caddaanka ahi gaaro $ 5.
Ku biir Rakuten
Ka hel Kaararka Hadiyadaha Amazon ee Bilaashka ah Meelaha Sahanka Online -ka ah
MyPoints waxay la mid yihiin Swagbucks (dhab ahaantii waxay ka tirsan yihiin shirkad isku mid ah) gunnada kaarka ka dib markaad dhammayso tiro cayiman oo hawlo ah (marka lagu daro dakhligaaga caadiga ah).
$ 10 Lacag Saxiix: Sheeg Halkan
Ku biir Qodobadayda
SurveyMonkey waa codsi abaalmarin ah oo kuu soo diraya sahan shan daqiiqo ah (oo ku saleysan astaantaada) markay diyaar noqdaan.
Waxaa lagu siin doonaa sahan kasta, oo markaad kasbato $ 5, waxaad soo furan kartaa kaarka hadiyadda ee Amazon. Haddii aad dareento naf -hurnimo, waxaad dooran kartaa inaad ku tabarucdo samafalka aad doorbidayso.
Ku biir SurveyMonkey
#6. Goobta Fikirka
Opinion Outpost waxay bixisaa abaalmarino dabacsan dhammaystirka sahaminta macaamiisha.
Waxaad ku bixin kartaa lacag caddaan ah PayPal ama waxaad isticmaali kartaa kaararka hadiyadda ee Amazon ama tafaariiqleyaasha kale ee caanka ah.
Ka sokow bixinta lacag si aad uga jawaabto sahanka, Opinion Outpost wuxuu soo jiitaa $ 10,000 rubuc kasta. Marka sahan kasta, waad dhammaystirtaa, waxaad kasbataa gelitaan kale isku aadka.
Ku soo biir Goobta Ra'yiga
Lacag qaado si aad ula wadaagto ra'yigaaga ku saabsan fikradaha alaabta SurveySpot. Ku soo gal cinwaankaaga iimaylka oo bilaw helista dalabyada sahanka isla markiiba.
Markay timaado waqtigii aad lacag bixin lahayd, waxaad haysataa ikhtiyaarro: dhigashada PayPal, kaararka hadiyadda ee bilaashka ah ee Amazon, Miles Airline, ama kaararka hadiyadda ee iTunes.
Sida Goobta Ra'yiga, SurveySpot sidoo kale waxay leedahay barbaro saddex -biloodle ah oo aad ku kasbato galitaan joogto ah.
Ku biir SurveySpot
iPoll waa goob codbixin oo kale oo aad dhibcaha ku soo furan karto Kaararka hadiyadda ee Amazon.
Qaado kaararka hadiyadda ee Amazon oo lacag la’aan ah (oo ay ku jiraan abaalmarinno) markaad isticmaaleyso iPoll si aad ula wadaagto aragtidaada alaabooyinka iyo adeegyada maalinlaha ah.
Ka hel sahannadaada guriga ama socdaalka adiga oo adeegsanaya mareegahaaga ama abka moobiilka. Iyo gunno dheeraad ah, $ 10,000 ayaa la bixin doonaa rubuc kasta.
Weligaa ma ogid, waxaad noqon kartaa guuleystaha nasiibka leh!
Ku biir iPoll
Isku qor Abaalmarinta sedex talaabo oo fudud oo isku day inaad hesho kaararka hadiyadaha Amazon ee bilaashka ah ee codbixinta. Dhab ahaantii, si aad sahan u qaadato.
Dhab ahaantii, PrizeRebel waxay bixisaa boqolaal xulashooyinka kaarka hadiyadda ah iyo sidoo kale PayPal iyo dhigaalka tooska ah ee bangiga. Ka hadal fursadaha!
Ku biir PrizeRebel
Calaamadaha ayaa iRazoo ku bixiya dib -u -eegista macmiilka waxayna ku siiyaan lacag si aad u bixiso fikradahaas. Qaado sahanno, fiirso fiidyowyo, ciyaar ciyaar, soo dejiso barnaamijyo, oo u kasbado dhibco dhammaantood.
U beddelo dhibcahaaga kaararka hadiyadda ee Amazon ee bilaashka ah, deebaajiga PayPal, ama kaararka hadiyadda mid ka mid ah shuraakada kale.
Ku biir iRazoo
InstaGC wuxuu sameeyaa wax sax ah - wuxuu kaa caawinayaa inaad ku guuleysato kaararka hadiyadda degdegga ah! Waxay kugu abaalmarinayaan waxqabadyada onlaynka ah sida sahanno, ka adeegashada boggooda internetka, akhrinta fiidiyowyada iyo daalacashada internetka.
Waxaad ka soo iibsan kartaa dhibcahaaga kaararka hadiyadaha wada -hawlgalayaasha 360, oo ay ku jiraan Amazon. Bixinta dhijitaalka ah waa mid deg -deg ah, markaa maahan inaad sugto si aad ugu raaxaysato abaalmarintaada.
Ku biir InstaGC
CashCrate waxay bixisaa siyaabo kala duwan oo lacag looga sameeyo internetka: samaynta sahanno, dukaamaysiga, cayaarista ciyaaraha ama tixraaca saaxiibbada.
Waxay lacag caddaan ah ku bixiyaan waxqabadyadooda badan waxaana lacag -bixinta loo qorsheeyey bilowga ama badhtamaha bisha iyadoo la bixin doono ugu yaraan $ 20.
Waxaad sidoo kale u beddeli kartaa dhibcaha la kasbaday kaararka hadiyadda ee Amazon adiga oo ciyaaraya cayaaraha oo aad ka qaybgasho tartamada xubnaha kale ee bulshada.
Ku biir CashCrate
#13. Baraha Nolosha
Iyadoo Goobaha Nolosha, waxaad kasbataa dhibco si aad u dhammaystirto sahannada internetka ee cilmi -baarista macmiilka adiga oo adeegsanaya mareegaha ama abka moobiilka.
Waxaad markaa dib ugu soo furan kartaa dhibcahaas wax kasta oo ku jira Catalog Abaalmarinta LifePoint, oo ay ku jiraan Kaararka Hadiyadda ee Amazon oo lacag la’aan ah.
Ikhtiyaarada kale waxaa ka mid ah lacag caddaan ah, kaararka hadiyadaha ee tafaariiqleyaasha / makhaayadaha iyo badeecadda.
Ku biir LifePoints
Ka hel Kaararka Hadiyadda Amazon ee Bilaashka ah Barnaamijyada Dukaameysiga
Waqti uma laha sahannada? Waxaad ku heli kartaa kaararka hadiyadda ee Amazon oo lacag la’aan ah wax aad horay u sameysay - kaliya ka adeego internetka.
Ebates waa xariirka wax iibsiga ee onlaynka ah oo kuu oggolaanaya inaad soo celiso wixii aad soo iibsatay. Si fudud u booqo goobta Ebates, raadi tafaariiqlaha aad rabto inaad wax ku iibsato, dooro tigidhada aad rabto inaad dalbato, oo guji “Dukaan Hadda”.
Markaa iska sii wad. Markaad wax iibsaneyso, soo -celinta lacag -celinta waxaa lagu shubi doonaa koontadaada Ebates. Dukaamada qaarkood ayaa laga yaabaa inay bixiyaan kaliya 1% lacag celin, laakiin xayeysiisyada qaarkood waxay bixin karaan ilaa 16% off!
Guji halkan si aad u hesho $ 10 gunno isdiiwaangalin bilaash ah.
Lacag -bixintu waxay dhacdaa saddexdii biloodba mar waxayna ku jirtaa lacag caddaan ah - jeeg boostada ku yaal ama ku shub xisaabtaada PayPal. Laakiin waxaad u adeegsan kartaa lacag caddaan ah inaad ku iibsato kaararka hadiyadda ee Amazon haddii ay intaas ka badan tahay macaankaaga.
Waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa kaararka hadiyadda ee Amazon iyada oo loo marayo Ebates portal iyo kasban cashback iyaga on.
Ku biir Ebates
Honey waa kordhinta biraawsarka oo kuu keydisa lacag adiga oo si otomaatig ah u raadinaya una adeegsanaya tigidhada ugu fiican markaad wax ka iibsaneyso internetka. Taas macnaheedu waa inaadan waligaa hilmaami doonin inaad isticmaasho koodh xayaysiis.
Lacagta aad ku kaydiso rasiidhada ka sokow, waxaad sidoo kale kasbataa Abaalmarinnada Dahabka ah ee Malabka marka aad wax ka iibsanayso dukaamada tafaariiqda ah ee ka qayb -galaya.
Asal ahaan, waxay la macno tahay inaad kasbato dhibco iibsiyada aad u beddeli karto abaalmarinno, sida kaararka hadiyadda ee Amazon oo lacag la’aan ah. Ma laga yaabaa inay fududaato?
Ku biir Malabka
Shopkick (iyada oo loo marayo macruufka or Android) waa app wax iibsi oo aad u sarreeya oo siiya isticmaaleyaasheeda sideed dariiqo oo ay abaalmarin ku heli karaan - AKA laadadka. Ku hel laadadka markaad gasho albaabka dukaamada la xushay iyadoo uu furan yahay barnaamijkaaga Shopkick, ka dibna iska baari koodhadhka alaabada la xushay si aad u kasbato wax intaas ka badan.
Waxaad kasbataa laadadka mar kasta oo aad wax ku iibsato kaadhka ku xidhan oo aad iska eegto rasiidhadaada markaad iibsanayso alaabta la soo bandhigay.
Waxa kale oo aad booqan kartaa dukaamada onlaynka ah, waxaad ka arki kartaa badeecadaha qaarkood, waxaad ka iibsan kartaa badeecadaha onlaynka ah, oo waxaad daawan kartaa fiidyowyo. Dhammaan waxqabadyadani waxay ku kasbadaan laadad, taas oo aad markaa ku soo furan karto abaalmarinno aad u wanaagsan sida kaararka hadiyadda ee Amazon oo lacag la’aan ah.
Mobee waa app adeegsi qarsoodi ah oo kuu oggolaanaya inaad ku fuliso hawlgallo qarsoodi ah dukaamada maxalliga ah. Abaalkaaga? Qodobbada dib loogu soo ceshan karo ikhtiyaarada kaarka hadiyadaha kala duwan, oo ay ku jiraan Amazon.
U adeegso barnaamijka si aad u furato guulo gaar ah oo aad kasbato dhibco intaa ka badan!
Ku biir Mobee
cawsha iibsadaa oo iibiyaa qalabka elektaroonigga ah ee la isticmaalo sida taleefannada, kiniiniyada iyo kombiyuutarada. Haddii aad rabto inaad iibiso shay, waxaad dooran kartaa habka lacag bixinta ee la rabo.
Waxaad dooran kartaa jeegga boostada, deebaajiga PayPal ama Kaarka hadiyadda dhijitaalka ah ee Amazon. All quruxsan ku haboon.
Ku biir Cawsha
Kaararka Hadiyadda ka hel Dukaamada Raashinka
Waxaad u adeegsan kartaa barnaamijyadan si aad uga hesho kaararka hadiyadda Amazon ee bilaashka ah dukaamada aad ugu jeceshahay, oo ay ku jiraan dukaamada raashinka. In kasta oo aan dadka oo dhammi dukaamaysiga tagin, haddana qof kastaa wuxuu u baahan yahay cunto. Codsiyadaasi waxay soo jiitaan dhagaystayaal badan.
Ibotta waxaa ugu horreeya dukaamada raashinka, laakiin waxaa jira noocyo kale oo tafaariiqle ah. Kani waa scanner kale oo wax lagu karsado, laakiin malaha waa kan ugu caansan suuqa.
Sifudud Soo dejinta app, dooro dukaan, oo dhex mari heshiisyada. Heshiisyadu waa asal ahaan lacag -bixinno dib -u -iibsi ah oo lagu iibsado alaabo gaar ah. Ku dar heshiisyada aad rabto oo wax u iibso sida caadiga ah. Markaad dhammaysato, waxa kaliya oo ay tahay inaad samayso waa inaad sawir ka qaadatid risiidhkaaga oo waxaad helaysaa lacag caddaan ah (ama kaarka hadiyadda ee aad dooratay).
Haddii aad had iyo jeer xiisaynaysay a Ku -biirinta Amazon Premium, waxaad ka heli doontaa $ 20 Kaarka Hadiyadda Amazon Ibotta marka aad ka iibsanayso is -qoris tan:
U adeegso ibotta si aad u iibsato Amazon Prime oo aad u hesho $ 20 kaarka hadiyadda ee Amazon.
Ku biir Ibotta
#19. Rasiidka Hog
Isticmaal Rasiidka Hog app si loo abuuro sawirrada rasiidhada wax iibsiga oo aad u soo gudbiso abaalmarinno. Meel kasta oo aad wax ka iibsato ama waxaad iibsato, Rasiidka Hog wuxuu ku beddelaa xogtaada iibsiga laba abaalmarin: qadaadiic ama khiyaamo.
Ku hel kaararka hadiyadaha ee Amazon oo lacag la’aan ah, lacag caddaan ah ama rukummada joornaalka oo qadaadiic leh oo isticmaal miiqyada si aad ugu ciyaarto boosaska Hog si aad fursad ugu hesho inaad ku guuleysato qadaadiic badan.
Ha welwelin, waxay hayaan xogtaada iibsiga qarsoodiga ah. Xusuusin: Hadda waxaa jira liis sugitaan si loogu biiro Rasiidka Hog.
Ku biir Rasiidka Hog
Kaararka Hadiyadda ka hel Amazon lafteeda
In kasta oo dadka intiisa badani ay maqleen sahannada internetka ee abaalmarinta iyo codsiyada dib -u -soo -celinta, dad badani ma yaqaaniin sida tooska ah looga helo kaararka hadiyadda ee Amazon oo bilaash ah. Waa kuwan dhowr siyaabood oo aad taas ku samayn karto:
#20. U shaqee Amazon
Raadinta culeyska dambe ee dabacsan? Amazon waxay bixisaa barnaamij la yiraahdo Farsamo yaqaan Turk (ama mTurk), oo asal ahaan suuq u ah shaqada internetka. Ganacsatadu waxay raadinayaan dad qabanaya hawlaha online -ka ah oo lacag ah, shaqaaluhuna waxay raadinayaan shaqooyin online ah oo u dhigma xirfaddooda iyo danahooda.
Hawlaha dhabta ahi way kala duwan yihiin laakiin waxaa ku jiri kara hawlaha gelitaanka xogta, farsamaynta fiidiyaha, abuurista nuxurka, qorista xogta ama sahannada. Haddii aad jeceshahay Amazon, waxaad toos ugu wareejin kartaa lacagtaada kaarka hadiyadda ee Amazon. Waxaad sidoo kale dooran kartaa dheelitirka PayPal haddii aad doorbideyso.
#21. Dib u shub Kaadhka Hadiyadda ee Amazon
Amazon hadda waxay leedahay heshiis wanaagsan: iibso kaarka hadiyadda ee jira ugu yaraan $ 100 oo ku hel $ 5 bilaash. Sidaad filan karto, dhagaxaani waa heshiis hal mar ah.
#22. Ka ganacsiga elektarooniggaaga iyo buugaagta
Wali ma haysaa taleefoon casri ah sanadkii hore? Waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad lacag ku hesho Barnaamijka Ganacsiga ee Amazon!
Waxay iibsadaan taleefannada casriga ah ee wanaagsan, kiniiniyada, qalabka ciyaarta, akhristayaasha elektarooniga ah, iyo buugaag. Waa inaad soo dirtaa alaabtaada si loo qiimeeyo, laakiin dhoofintu waa bilaash. Haddii la aqbalo, waad fiicantahay inaad tagto.
Haddii kale, alaabta waa laguu soo celin doonaa. Lacag bixinta alaabta la aqbalay? Kaararka hadiyadda ee Amazon, dabcan.
#24. Noqo Xiriiriyaha Amazon
Haddii aad leedahay degel ama baloog, waxaad ku kasban kartaa lacag dheeri ah adoo adeegsanaya suuq -geynta. Isku -qor Amazon Associates oo kor u qaad qaar ka mid ah alaabada Amazon ee mareegahaaga. Haddii akhristayaashaadu gujiyaan xiriirintaada oo ay wax iibsadaan, waxaad heli doontaa lacag iib ah iibka. Waxaa lagu bixin karaa lacag caddaan ah ama kaararka hadiyadda ee Amazon oo lacag la’aan ah.
Ikhtiyaaradan oo dhan, waxaad yeelan kartaa su'aalo! Waa kuwan jawaabaha su'aalaha inta badan la isweydiiyo.
Mudo intee leeg ayay qaadataa in la helo kaarka hadiyadda ee bilaashka ah ee Amazon?
Waxaad ku iibsan kartaa kaarka hadiyadda 15 ama 20 daqiiqo inta badan hawlaha halkan lagu sharraxay. In kasta oo barnaamijyada qaarkood ay kaaga baahan yihiin inaad sawirro qaaddo ama raac tilmaamaha, haddana barnaamijyada qaarkood ayaa laga yaabaa inay kaa codsadaan inaad is -qorto oo aad ku socodsiiso abka aaladda aaladdaada.
Immisa goobood ayaan ku biirayaa?
Iyada oo ku xidhan inta wakhti ee aad haysato, waxaad ka qayb qaadan kartaa goob kasta oo lagu taliyo. Dadka qaar waxay doortaan bogag internet oo aad ka furan karto $ 1 kaararka hadiyadda si dhaqso laguu siiyo. Si kastaba ha ahaatee, adiga ayay kugu xiran tahay dib u heshiisiinta waxqabadyada aad ku raaxaysato qabashada iyo inta laguugu abaalmarin doono wakhtigaaga.
Waxaan hayaa talo: Waxay noqon kartaa mid waxtar leh in la abuuro koonto Gmail oo gaar ah oo loogu talagalay dib -u -soo -celinta cashuuraha iyo goobaha sahanka. Shabakadahaan waxaa lagu yaqaan inay soo diraan emaylo badan. Sidaa darteed, waa fikrad wanaagsan in la qeexo goob u gaar ah martida.
Sideen u ogaadaa khiyaanooyinka kaarka hadiyadda ee Amazon?
Sida laguugu khiyaameyn karo lacag caddaan ah, kaararka hadiyadda ee Amazon waxaa sidoo kale codsada kuwa doonaya inay kaa soocaan lacagtooda. Haddii qof kula soo xiriiro oo ku dhaho deymo aan la bixin ama aad canshuur bixiso oo aad ku bixiso kaarka hadiyadda, waa khiyaano. Qiyaanada xitaa waxay isku dayaan inay dadka u sheegaan inay lacag sameeyeen, laakiin waa inay lacag ku bixiyaan Kaarka Hadiyadda ee Amazon ka hor inta aysan soo celin lacagtooda.
Khiyaamooyinka kale ee aad maqasho, waxaad ka heli doontaa liisas been abuur ah oo ah alaab aad si dhaqso ah u iibin karto, aaladaha elektiroonigga ee burcad -badeedda, xubin qoyska ka tirsan oo xaalad degdeg ah ku jira ama dallacsiinta adeegyada sida telefishanka fiilada ama Internetka. Haddii qof kula soo xiriiro oo ku weydiiyo inaad ku bixiso Kaadhka Hadiyadda ee Amazon, tirtir iimaylka ama tirtir. Ku sii wad calooshaada iyo odhaahdii hore ee ahayd haddii ay aad ugu fiican tahay inay run noqoto, waxay u badan tahay
Waa maxay Kaarka Dukaanka Prime Prime Amazon?
The Kaarka Amazon Prime Store waxaa soo saaray Synchrony Bank waxayna u oggolaanaysaa xubnaha Premium ee leh kaarka inay kasbadaan 5% iyadoon xad lahayn Amazon.com. Kani waa kaar lacag la'aan ah oo sidoo kale bixiya xulashooyin maaliyadeed oo xayeysiisyo kala duwan oo loogu talagalay iibsashada in ka badan $ 149. Iyada oo ku xidhan qiimaha, iibsadayaashu waxay la bixi karaan 5% ama 0% isla lacag-bixinnada billaha ah ee 6, 12 ama 24 bilood.
Kaadhku wuxuu leeyahay iska diiwaangelin sanadle ah oo ah 27.74% wuxuuna hadda bixiyaa $ 10 kaarka hadiyadda Amazon oo lagu dari doono koonto xubin cusub marka la ansixiyo. Dadka haysta kaarka mas'uul kama aha wax isdabamarin, laakiin waxaa jira xad u leh waxa lagu iibsan karo kaarka. Hubi inaad u badan tahay inaad akhriday shuruudaha iyo xaaladaha oo aad fahantay.
Haddii aad tahay balwad Amazon ah ama aad tahay dukaanle marmar ah, waxaad hubtaa inaad u adeegsan doonto kaararka hadiyadda ee bilaashka ah ee Amazon ee aad kasban doonto adoo adeegsanaya talooyinkan.
Helitaanka Kaararka Hadiyadaha Bilaashka ah ee Amazon ayaa u fudud sida soo dejinta iyo appka. Kaliya isku day!
Sida Lacag Loogu Kaydiyo Starbucks: 15 Siyaabood Oo Lagu Helo Cabitaannada Starbucks Jaban
Dib u eegista Megatypers 2021: Ma Sharcibaa Mise Khayaano Lacag Kale?
Haddi aad tahay abuure nuxur weyn ama saamayn ku leh, taageereyaasha kaliya ayaa bixiya hab ku habboon oo kor loogu qaado bulshadaada…
Fahamka sida lacag looga sameeyo guriga markaad caruur tahay waxay noqon kartaa hawl aad u adag. Wax badan oo…